खोप लगाएको तीन सातासम्म कोराना संक्रमणको जोखिम, खोप लगाएका व्यक्तिमा संक्रमण - Dainik Nepal
दैनिक नेपाल २०७७ फागुन १८ गते ७:१६
काठमाडौं, १८ फागुन । सुरक्षित मानिएको कोभिसिल्ड खोप लगाएपछि शरीरमा एन्टिबडी नबन्दासम्म कोराना संक्रमणको जोखिम रहने विज्ञहरूले बताएका छन्। पहिलो डोज लगाएको २२ दिनपछि मात्र एन्टिबडी बन्ने भएकाले सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन उनीहरूको सुझाव छ।
प्रभावकारिताका दृष्टिले खोप लगाएका मध्ये झण्डै १ लाख २० हजार संक्रमणको जोखिममा रहेको विज्ञ बताउँछन्। स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी)का निर्देशक डा. कृष्ण पौेडेलले भने, ‘ खोपको दोस्रो डोज (मात्रा) पाइसकेका छैनन्। सुरक्षा मापदण्ड नअपनाउनेहरूलाई खोप लगाएकाहरूलाई पनि कोरोना संक्रमण हुन सक्छ।’
त्यसको पहिलो खेपमा आएको १० लाख मात्रा लगाउने तयारी भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार खोप अभियानको पहिलो र दोस्रो चरणमा कोभिड १९ खोपको पहिलो मात्रा पाएका सबैलाई १० देखि १२ हप्ताको फरकमा वैशाख ७ देखि १५ गतेसम्म दोस्रो मात्रा दिने तयारी गरिएको छ।
उनले भने, ‘पहिलो डोज (मात्र) लगाएका व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण हुन सक्छ। खोप लगाएको १६ दिनमा संक्रमण भएको हो भने एन्टिबडी विकास हुने समय पनि भइनसकेको हुनुपर्छ। त्यसबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन।’ दिनेश गाैतमले अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
काठमाडौं एमालेका जिल्ला सदस्य एवं वडाध्यक्ष मालीको निधन